महामारीबीच कामको खोजीमा भारत जाने लस्कर – radiokaski.com महामारीबीच कामको खोजीमा भारत जाने लस्कर – radiokaski.com
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले चार्टर्ड उडानमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइरहेको छ । तर, यहीवेला सुदूरपश्चिमका बासिन्दा भने अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको भारततर्फ जान थालेका छन् । पाँच महिनाअघि कैयौँ दिन पैदल हिँडेर घर फर्केका उनीहरू लामो लकडाउन र अहिले निषेधाज्ञाले दैनिकी चलाउन मुस्किल भएपछि बाध्य भएर भारततर्फ जान लागेको बताउँछन् ।
लोकेन्द्र पाँच वर्षदेखि भारतको राजधानी दिल्लीस्थित एक ‘सपिङ कम्प्लेक्स’मा सुरक्षागार्डको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । ‘भारतमा कोरोना फैलन थालेपछि डरले घर फर्किएको थिएँ । अहिले त्योभन्दा झन् बढी कोरोना फैलिरहेको छ । तर, गाउँमा चार महिनासम्म केही काम पाइनँ,’ बुधबार बिहान सीमानाका काट्दै गर्दा उनले भने, ‘बेरोजगार बस्दा घरपरिवार पाल्न पनि समस्या हुन थाल्यो । त्यही भएर पुरानै काममा जान लागेको हुँ ।’ दिल्लीबाट साहुले पनि फोनमा काम गर्न आउन भनेको उनले सुनाए । निषेधाज्ञामा सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द रहेकाले उनीसहित चारजना १० हजार रुपैयाँमा गाडी बुकिङ गरेर बैतडीबाट बुधबार बिहानै धनगढी पुगेका थिए ।
उनी पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि गत फागुनमा भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए । चार वर्षदेखि पन्जाबको लुधियानामा निजी गाडी चलाउँदै आएका छन् । त्यसअघि पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा सात वर्षजति मजदुरी गरेका थिए । ‘त्यही कामका भरमा आमा–बुबा, श्रीमती, छोराछोरी, भाइबहिनीसहित १० जनाको परिवार पाल्नुपर्छ,’ नाका पार गर्ने हतारोमा रहेका डबलले भने, ‘महामारीको वेला घरमा बस्न त कसलाई मन लाग्दैन । तर, यहाँ बसेर काम पाइएलाजस्तो लागेन । कोरोनाको डर लागे पनि परिवार पाल्न भारत फर्कनैप¥यो ।’ स्वदेशमै गाडी चलाउने काम खोजेको भए पनि ६ महिनासम्म नपाएको उनले सुनाए ।
डोटीको घाङलका वीरबहादुर साउद त नाबालक छोरीसहित परिवारै लगेर भारत जान बुधबार बिहान नेपाल–भारत नाका त्रिनगर पुगेका थिए । पत्नी र छोरीलाई लिएर भारत जान लागेको उनले गाउँमा बस्दा बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै गाह्रो भएपछि भारत फर्किन लागेको बताए । भारतको लुधियानास्थित कपडा कम्पनीमा १५ वर्षदेखि ‘सेल्सम्यान’को काम गर्दै आएका उनी वैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए । त्यतिवेला कोरोनाका कारण कम्पनी बन्द भएको थियो भने उनलाई पनि घर फर्किए सुरक्षित भइएला भन्ने लागेको थियो ।
यता गाउँमा केही काम नमिलेको र उता कम्पनी पनि खुलेकाले फर्किन लागेको उनले बताए । ‘कम्पनी खुलिसकेकाले आउनु भन्ने खबर आयो । यता घरमा बेरोजगार बस्नुभन्दा काम गरे दुई–चार पैसा कमाइला,’ वीरबहादुरले भने, ‘कोरोनाको डर मानेर पनि के गर्नु ? परिवार पाल्नका लागि भए पनि काम त गर्नैप¥यो ।’ स्वदेशमा जागिर नपाउँदा आम्दानीको स्रोत र कमाइखाने जग्गाजमिन पनि नभएपछि उनी डेढ दशकअघि भारत पसेका थिए । भारतको रोजगारीमै परिवार निर्भर रहेकाले कोरोनाको महामारी भए पनि उतै लाग्न बाध्य भएको उनले बताए ।
बेरोजगार बस्दा छाक टार्नसमेत गाह्रो भएपछि महामारीबीच पनि भारत फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको उनीहरूको भनाइ छ । रोजगारीकै लागि भारत जान लागेका बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको देउराका भरत विष्टले महामारीको त्रास फैलिएका वेला काम खोज्न अर्काको देश जानु रहर नभएको बताए । ‘साँझ–बिहान छाक टार्ने समस्या नभएको भए यस्तो महामारीका वेला विदेश जाने रहर थिएन,’ भरतले भने, ‘यस्तो त्रासका वेला परिवारसँग घरमै बस्ने इच्छा कसलाई नहोला र ? स्वदेशमा सामान्य काम पनि नपाएपछि बिदेसिनुप¥यो ।’ उनी गत नौ वर्षदेखि भारतको बेंग्लोरमा निजी गाडी चलाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूजस्तै कोरोनाका कारण गत फागुनदेखि वैशाखसम्म घर फर्किएका सुदूरपश्चिमका बासिन्दा रोजगारीका लागि फेरि भारत जान लागेका हुन् । दुई सातायता भारत फर्किनेहरूको ताँती लाग्न थालेको छ । अहिले भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको जानकारी भए पनि उनीहरू कामका लागि स्वदेश छोड्न विवश भइरहेका छन् । गाउँमा लामो समय बेरोजगार बस्दा दैनिक छाक टार्न पनि समस्या हुन थालेपछि महामारीकै वेला भारत फर्किन परिरहेको उनीहरूले बताउँछन् । भारत जानेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपाली र भारतीय नागरिकसमेत गरी असारदेखि १० भदौसम्म यो नाकाबाट साढे सात हजार र जेठदेखि अहिलेसम्म गड्डाचौकी नाकाबाट सात हजारजना भारत गएका छन् । अहिले भारत जानेमध्ये अधिकांश नेपाली हुने गरेका सशस्त्र प्रहरी बल ३५ नम्बर गण कञ्चनपुरका डिएसपी देवबहादुर चन्दले बताए । सीमानाका बन्द रहेकाले कानुनतः नेपालीले भारत जान नपाइने भए पनि भारतीय परिचयपत्र खुल्ने कागजात भएका नेपाली जाने गरेका उनले बताए ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपालीलाई भारत र भारतीयलाई नेपाल आउन–जान प्रतिबन्ध गरिएको छ । आधार कार्ड, रासन कार्डलगायत भारतीय परिचय खुल्ने कागजात देखाएपछि नेपालीलाई सीमामा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रवेशको अनुमति दिने गरेका छन् । एउटै ठाउँमा लामो समय काम गरेका कतिपयको काम गर्ने ठाउँको मालिकले भारतीयको परिचय खुल्ने ‘आधार कार्ड’ र ‘रासन कार्ड’ बनाइदिन्छन् । लामो समय भारतमा काम गरेका धेरैजसो नेपालीसँग यी कार्डहरू हुने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमको सामाजिक तथा आर्थिक विषयका जानकार प्रा.डा. हेमराज पन्त विश्वमै सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको मुलुकमा यतिवेला रोजगारीका लागि नेपाली भारत जानु राजनीति गर्नेहरूका लागि लज्जाको विषय भएको बताउँछन् । ‘अहिले भारतमा विश्वमै सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको छ । यतिवेला भारत जानु भनेको कालको मुखमा जानुजस्तै हो,’ प्रा.डा. पन्तले भने, ‘यहाँ खान पनि नपुगेपछि मरे पनि उतै मरुलाँ भनेर नेपाली भारत जाँदै छन् । राजनीति गर्ने र हामी सबैका लागि पनि लज्जाको विषय हो ।’
प्रदेश सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनाका लागि अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘एकैचोटि भारतमा गएका सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएला, तर थोरैलाई दिने सुरुवात पनि हुन सकेन,’ प्रा.डा. पन्तले भने । कोरोना महामारीले स्वदेश फर्केको युवा जनशक्तिलाई उद्यम र देश निर्माणमा लगाउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
अब सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराएर रोजगारी सिर्जना र्छौँ : मन्त्री बोहरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर सरकारले यस वर्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्ने बताए । तालिम तथा धितोविना ऋण दिएर बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले डेढ अर्बको स्वरोजगार विकास कोष स्थापना गरेको उनले बताए । यस्तै, उद्यम गरिरहेका र उद्यम गर्न चाहनेलाई सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन एक अर्बको पुनर्कर्जा कोष पनि यस वर्ष कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । यसले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्केका यहाँ बेरोजगार रहेकाहरू लाभान्वित हुने मन्त्री बोहराको भनाइ छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको September 2, 2020 September 2, 20202बर्ष अगाडी 24237 जनाले हेर्नुभएको